नमोबुद्ध नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिकै सासुलाई कोरोना पुष्टि – Radio Roshi
नमोबुद्ध नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिकै सासुलाई कोरोना पुष्टि
in रोशी खबर / समाचार / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	September 13, 2020
यश कुमार परियार–भदौ २८,
काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिको सासुलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । संक्रमण पुष्टि हुनेमा साविक वडा नं ५ हाल वडा नं १ का महिला वडा सदस्य को ७४ वर्षिय सासु रहेको वडा अध्यक्ष कर्म ग्याल्बो लामाले जानकारी दिए । संक्रमित महिलालाई एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल पुर्याईएको वडा अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । संक्रमित महिला उपचारको निमित्त बनेपाको शिर मेमोरीयल अस्पतालमा उपचारको लागि गएकि थिईन् । अस्पतालले निमोनिया भएको भन्दै स्वाव लिएर पठाएको र परिक्षणको रिपोर्ट आज आएको वडा अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए ।
यसैगरी नमोबुद्ध वडा नं ३ चरुवा घर भएकी एक ७८ वर्षिय महिलामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । संक्रमित महिलालाई केहि दिन अघि देखि झाडा बान्ता लागेको र नौविसेको मेथिनकोट अस्पतालमा गई जाँच गाराएको तर त्यहा नभएपछि धुलिखेल अस्पताल लगिएको वडा अध्यक्ष राम सरण हुमागाँईले जानकारी दिए । संक्रमित महिला हाल अस्पतालमा नै रहेको बताईएको छ ।
वडामा नै संक्रमित भेटिएपछि नमोबुद्धका दुवै वडाले संक्रमितको स्थान वरपर सिल गर्ने तयारी भईरहेको बताएका छन् ।
यो सँगै काभ्रेमा आज साँझ सम्म १० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य कार्यलय काभ्रेका डा. नरेन्द्र कुमार झाका अनुसार संक्रमित हुनेमा बनेपाका ७ जना, नमोबुद्ध नगरपालिकाका २ जना र पाँचखाल नगरपालिकाका १ जना रहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमितमध्ये १ सय ९९ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । ३८९ सङ्क्रमित मध्ये १ सय ९९ कोरोना मुक्त भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डा. नरेन्द्र झाले जानकारी दिनुभयो ।